Raayyaan Ittisaa Ameerikaa Ijaarsa dallaaf deeggarsa doolara Ameeikaa biiliyoona 3.4 taasise – Fana Broadcasting Corporate
Raayyaan Ittisaa Ameerikaa Ijaarsa dallaaf deeggarsa doolara Ameeikaa biiliyoona 3.4 taasise
Finfinnee, Hagayya 30,2011 (FBC) – Raayyaan Ittisaa Ameerikaa Peentaagoon dallaa daangaa Ameerikaa fi Meeksikoo irratti ijaaramuf deeggarsa doolaraa Ameerikaa biiliyoona 3.4 taasiseera.
Ministirin Raayyaa Ittisaa Ameerika Maark Ispeer dallaa Kiiloo meetira 280 dheeratu ijaaruuf deeggarsa doolara Ameerikaa biiliyoona 3.4 kan taasisaan yoo ta’u, projeektoota Raayyaa Waraanaa 127 ta’u dhaabudhan jedhaniiru.
Doonaald Traamp preezidaantummaaf si’a dorgomaan yaadota kaasaan keessaa ijaarsa dallaa Ameerikaa fi Meeksikoo ijaarsisuun tokko ture. Haata’utii preezitaantichi baasii ijaarsa dallichaa Meeksikoon akka baastu haasa’a turaniiru.
Meeksikoon garuu ijaarsa dallaa kanaaf baasii tokkoyyu akka hin baasnee himteetti.
Koongiresiin Ameerikaa maallaqa ijaarsa dallaaf ta’uu barbaadaa kan jiraan yoo ta’u, Rippabiliikoonni hedduun garuu baasii ijaarsa dallaa kanaaf ba’utti hin gammanne.
Deeggarsi Raayyaan Ittisaa Ameerikaa doolara Ameerikaa Biiliyoona 3.4 taasisee kun bulchiinsoota Ameerikaa 23 fi ijaarsa projeektoota 127 biyyoota biroo 20 keessatti raawwatamuuf ture yeroof akka dhaabataan taasisuun ta’un himameera.